Kheyre: "Boliiska waa Wehelka Shacbiga" Maxa ka run ah? Akhriso. - Muqdisho Online
Home Wararka Kheyre: “Boliiska waa Wehelka Shacbiga” Maxa ka run ah? Akhriso.
Kheyre: “Boliiska waa Wehelka Shacbiga” Maxa ka run ah? Akhriso.
RW Xasan Khayre ayaa shalay tagay munaasab lagu qabtay xarunta tababarka ciidanka booliiska ee General Kaahiye, isagoo leh waxaan tababar u xerayaa ciidan ilaalin doona nabadda Caasimadda. Waxaasa dad badani isweydiinayaan RW kheyre sow maaha kii noo keenay ciidankii reerkiisa u badnaa oo uu xasilinta ugu yeeray shacabka Muqdishana u yaqaanneen XAASIDIINTA, kadib markii la tababaray oo hub iyo lacagna la siiyey la yiri iska qaata wixiinna oo kala taga. Waxaana xigtay in ku biireen Shabaab iyo Daacishta maanta isku haysta anaa kaa badiya iyo kaa badiya dhaca, dhibaateynta iyo Dilka dad Muqdisho.
RW Kheyre wali ma waxaa uu rabaa inuu 1400 askari oo la hubo inay yihiin qaraabadiisa qeybtoodii labaad ee ciidankii xasilinta kadib inuu noogu sheego inay soo celin doonaan amaanka caasimadda uu isaga si u talagal ah in la wiiqo uga shaqeeyey.
Waa nasiibxumada dalka ku habsatay markii koox qabiili ah oo kala daran uu dalka gacanta u galay. Farmajo iyo reerkiisa waxay dhismo ciidan ka wadaan gobolka Gedo oo ay reerkiisa ka soo jeedaan si ay jubbooyinka u qabsadaan, waxaana agacanta loo geliyey dhammaan hubkii Shinaha yo Qatar tooska looga keenay iyadoo Itoobiya iyo Erateriyana ay xuduudka uga soo gudbiyaan waxay rabaan oo hub ah.
Dhinaca kale kheyre ayaa isagana Xamar ka wada ciidan uu is leeyahay markey xumaato ha ku difaacaan oo uu hadda bilaabay in magaca boliiska lagu tababaro. Ciidanka la leeyahay waxaa loo soo xeray tababar oo sugaya amaanka caasimadda ma ciidan cirka ka soo dhacayba sow kuwii shalay la lahaa xasilinta qeybtoodii hore oo si xaasidnimo ah ummada Muqdisho u laayey maaha?
RW kheyre waxaa uu Farmajo iyo ehelkiisaba ka dhaaciyey inaysan dadka Muqdisho isaga oggoleyn oo ay diidan yihiin inay jufadiisa xukunto sidaas daraadeed ay ku tahay inuu sameeyo ciidan mar waliba jufadiisa u badan oo ka amar qaata isaga, fuliyana warkiisa gar iyo gardarro.
Ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa la sheegayaa in laga soo xulay degmooyinka gobalka mudda afar bilood ahna la barayay sharciyada booliiska iyo la dhaqanka bulshada. Maxaa shacabka iyo warbaahinta la marin hababiyey oo markii koox bulshada Xamar ka waxabdo koox kale loo soo labisaa laguna sheegaa magac wanaagsan oo ciidan lahaan jiray.
Runtii waa doqonimo R/ Wasaare in dhagahaagu ay fkaaga maqli waayaan haddii ay boliiska sidaad warbaahinta u sheegtay ay u shaqeyn lahaayeen oo aad sidaan u fari lahayd, Xamar waxay ahaan lahayd magaalo ammaankeeda la isku hallayn karo. Hasa yeeshee uma shaqeeyaan oo sidaas looma amro ee waxaa la amraa ku tumashada sharciga, baadidda bulshada baahan iyo u been guurka warbaahinta iyadoo magaca iyo haybadda laga dilayo ciidanka boliiska Somaliyeed oo la hubo haddii ay helaan hogaan ku dayasho mudan oo caddaalad ah waxay Xamar kaga sifeyn karaan saacado gudahood cid kasta oo ammaanka wax u dhimeysa.
Haddaba Mudane Kheyre sidee ayey ciidanka runta ah ee Boliiska kuu aaminayaan? Ileyn kama warqabtid kooda buka, kan baahan ee beerka dhulka ku haya, kan ay maxasta ka gaajoon yihiin, kan dhaawacan, kan ay shebaabka intey dilaan filimo ka duubaan si ay ugu tabartaan? waayo waxay og yihiin inaad tahay shakhsi faan iyo geyru masuulnimo dilatay.
Bal sawirkaan eego. Waxaad ciyaal dhallinyaro ah ku amartay in ay hareeraha kaa ordaan oo ay xabadda isu dhigaan iyagoo suudad loo soo geliyey tan oo aad kaga dayatay shakhsiga tusaalaha kuu ah ee aad raadkiisa ku joogtid Kim Jung Un.
RW wasaaraha haddii aad damiir leedahay is casil markaad qoraalkaan iyo Sawirkaan ceebta ah aad aragto waayo waxaad sameysay waa liidnimo tii ugu hooseysay. Waxaa kaloo kaa sii liita kan ku keenay ee noo afkiisa nooga qiray inaad ka fiican tahay.
Previous articleAMISOM to close Somali bases
Next articleMaxaa Miskiinkaan Kamerada Horteeda kaga Ooysiiyey?